IAzerbaijan | Amazwe Nabantu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
IAZERBAIJAN lelona lizwe likhulu kumazwe amathathu akumda weYurophu neAsia. Kwiminyaka emalunga newaka eyadlulayo, izizwe zamaTurkic zaqalisa ukugaleleka ngobuninzi kulo mmandla. Ezi zizwe zafika zafunda izithethe zabantu bomthonyama, baza nabantu bomthonyama bafunda izithethe zazo. Kungenxa yoko le nto ulwimi lwesiAzerbaijani lusondele kwisiTurkey nesiTurkmen.
Ama-Azeri [abantu baseAzerbaijan] adume ngobubele kwaye ngamaqhakra-qhakra. Iintsapho zawo zimanyene kwaye ziyancedana ngamaxesha kaxakeka.
Ama-Azeri ayawuthanda umculo kunye nemibongo. Xa kuculwa uhlobo lomculo obizwa ngokuba yi-mugam, imvumi iye icengceleze imibongo yesi-Azeri ngoxa kusitsho izixhobo zomculo womthonyama. Umntu ocula olu hlobo lomculo ufanele abe yincutshe yawo.
Enye yezona zinto azithandayo ama-Azerbaijani, yiti
Enye yezinto ezithandwa ngama-Azerbaijan yiti. Iphungwa ngeglasi emile okwepere kuze kufakwe igaqa leswekile, mhlawumbi ikhatshwa ngamandongomane, iiamangile kunye neerasentyisi. Iivenkile ezithengisa iti zikho nakwezona dolophu zincinci.
ULwandle lweCaspian olukwimpuma yeli lizwe, likhaya lentlanzi enkulu ebizwa ngokuba yi-sturgeon ngesiNgesi. Le ntlanzi iphila iminyaka engaphezu kwe-100. Enye yezona zinkulu kwezakha zalotywa yayinobude obuziimitha ezi-8.5 kwaye ubunzima bayo buziikhilogram ezili-1 297! Le ntlanzi ithandwa kakhulu ngenxa yamaqanda ayo ekwenziwa ngawo ukutya okubizwa ngokuba yi-caviar, okubiza imali eninzi.
Ama-Azeri ngabantu abaluthandayo unqulo nokuncokola ngoThixo. Uninzi lwawo ngamaSilamsi. Zikho nezinye iinkonzo, kuquka amaNgqina kaYehova angaphezu kwewaka—yaye uninzi lwawo ngama-Azerbaijani omthonyama.
AmaNgqina kaYehova afundisa izigidi zabantu emhlabeni wonke iBhayibhile, esebenzisa incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Le ncwadi ifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwama-250, kuquka isiAzer­baijani.
Inani labemi: 9 000 000
Idolophu elikomkhulu: yiBaku
Ulwimi lwaseburhulumenteni: isiAzerbaijani
Izinto ezithengiselwa amanye amazwe: yiPetroli